18.10.20 Avyakt Bapdada Nepali Murli 07.04.86 Om Shanti Madhuban
तपस्वी-मूर्त , त्यागमूर्त विधाता नै विश्व-राज्य अधिकारी
आज रूहानी दीपकले आफ्ना रूहानी पुतलीहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सबै रूहानी पुतलीहरू दीपकसँग मिलन मनाउनको लागि चारैतिरबाट पुगेका छन्। रूहानी पुतलीहरूको प्यार या त रूहानी दीपकलाई थाहा छ या त रूहानी पुतलीहरूलाई थाहा छ। बापदादालाई थाहा छ– सबै बच्चाहरूको दिलको स्नेहले आकर्षण गरेर यो अलौकिक मेलामा सबैलाई ल्याएको छ। यो अलौकिक मेलालाई या त अलौकिक बच्चाहरूले जानेका छन् या त बाबाले जान्नु भएको छ! दुनियाँको लागि यो मेला गुप्त छ। यदि कसैलाई– रूहानी मेलामा जाँदैछौं भन्यौ भने के बुझ्लान् र? यो मेला सदाको लागि भरपुर बनाउने मेला हो। यो परमात्म-मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाउने मेला हो। बापदादाले सबै बच्चाहरूको दिलको उमंग-उत्साहलाई देखिरहनु भएको छ। हरेकको मनमा स्नेहको सागरको लहर लहराइरहेको छ। यो बापदादाले देखिरहनु भएको छ र जान्नु पनि भएको छ– यही लगनले विघ्न विनाशक बनाएर मधुबन निवासी बनाएको छ। सबै जनाको सबै कुरा स्नेहमा समाप्त भएको छ। एवररेडीको रिहर्सल गरेर देखाउनु भयो। एवररेडी भएका छौ नि! यो स्वीट ड्रामाको स्वीट पार्ट देखेर बापदादा र ब्राह्मण बच्चाहरू हर्षित भइरहेका छन्। स्नेहको पछाडि सबैकुरा सहज पनि लाग्छ र प्यारो पनि लाग्छ। जुन ड्रामा बनेको छ त्यो ड्रामा वाह! कत्ति पटक यसरी दौडी-दौडी आएका छौ। ट्रेनमा आएका हौ वा पंखले उडेर आएका हौ? यसलाई भनिन्छ– जहाँ दिल हुन्छ त्यहाँ असम्भव पनि सम्भव हुन्छ। स्नेहको स्वरूप त देखायौ, अब अगाडि के गर्नु छ? जुन अहिलेसम्म भयो त्यो श्रेष्ठ भएको छ र श्रेष्ठ रहने छ।
अब समय प्रमाण सर्व स्नेही, सर्वश्रेष्ठ बच्चाहरूसँग बापदादाले के चाहनुहुन्छ? त्यसो त पूरा सिजन समय समयमा इशारा दिनुहुन्छ। अब ती इशाराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने समय आइरहेको छ। स्नेही आत्मा हौ, सहयोगी आत्मा हौ, सेवाधारी आत्मा पनि हौ। अब महातपस्वी आत्मा बन। आफ्नो संगठित स्वरूपको तपस्याको रूहानी ज्वालाबाट सर्व आत्माहरूलाई दु:ख अशान्तिबाट मुक्त गराउने महान कार्य गर्ने यो समय हो। जसरी एकातर्फ अनाहकमा रगतको खेलको लहर बढ्दै गइरहेको छ, सर्व आत्माहरूले आफूलाई बेसहारा अनुभव गरिरहेका छन्, यस्तो समयमा सबै सहाराको अनुभव गराउने निमित्त तिमी महातपस्वी आत्माहरू हौ। चारैतिर यो तपस्वी स्वरूपद्वारा आत्माहरूलाई रूहानी चैनको अनुभव गराउनु छ। सारा विश्वका आत्माहरू प्रकृतिबाट, वायुमण्डलबाट, मनुष्य आत्माहरूबाट, आफ्ना मनका कमजोरीहरूबाट र तनबाट बेचैन छन्। यस्ता आत्माहरूलाई सुख-चैनको स्थितिको एक सेकेण्ड पनि अनुभव गरायौ भने तिमीहरूलाई दिलबाट बारम्बार धन्यवाद दिनेछन्। वर्तमान समयमा संगठित रूपको ज्वाला स्वरूपको आवश्यकता छ। अहिले विधाताका बच्चा विधाता स्वरूपमा स्थित रहेर हर पल दिँदै जाऊ। अखण्ड महान लंगर लगाऊ किनकि रोयल भिखारी धेरै छन्। केवल धनका भिखारी मात्रै भिखारी हुँदैनन्, मनका भिखारी अनेक प्रकारका छन्। अप्राप्त आत्माहरू प्राप्तिको एक बुँदको लागि पनि धेरै प्यासी छन् त्यसैले अब संगठनमा विधातापनको लहर फैलाउनु छ। जुन खजाना जम्मा गरेका छौ त्यो जति मास्टर विधाता बनेर दिँदै जान्छौ त्यति भरिँदै जानेछ। कति सुनेका छौ। अब गर्ने समय हो। तपस्वीमूर्तको अर्थ हो– तपस्याद्वारा शान्तिका, शक्तिका किरणहरू चारैतिर फैलिरहेको अनुभवमा आओस्। केवल स्वयंको लागि याद स्वरूप भएर शक्ति लिनु वा मिलन मनाउनु त्यो बेग्लै कुरा हो। तर तपस्वी स्वरूप भनेको अरूलाई दिने स्वरूप हो। जसरी सूर्यले विश्वलाई उज्यालोको र अनेक विनाशी प्राप्तिहरूको अनुभूति गराउँछ। त्यसैगरी महान तपस्वी रूपद्वारा प्राप्तिका किरणहरूको अनुभूति गराऊ। यसको लागि पहिला जम्माको खाता बढाऊ। यस्तो होइन यादले वा ज्ञानको मननले स्वयंलाई श्रेष्ठ बनायौ, मायाजित विजयी बनायौ– केवल यसैमा खुसी नरहनु। सर्व खजानाद्वारा सारा दिनमा कति जनालाई विधाता बन्यौ। सबै खजानालाई हरेक दिन कार्यमा लगायौ वा केवल जम्मालाई मात्र देखेर खुसी भइरहेका छौ? अब यो चार्ट राख– खुशीको खजाना, शान्तिको खजाना, शक्तिको खजाना, ज्ञानको खजाना, गुणको खजाना, सहयोग दिने खजानालाई कति बाँड्यौ अर्थात् कति बढायौ? यसबाट जुन त्यो सामान्य चार्ट राख्छौ त्यो पनि स्वत: नै श्रेष्ठ हुन्छ। पर-उपकारी बन्नाले स्व-उपकारी स्वत: नै बन्छौ। बुझ्यौ– अब कुनचाहिँ चार्ट राख्नु छ? यो तपस्वी स्वरूपको चार्ट हो– विश्व कल्याणकारी बन्नु। त्यसैले कतिको कल्याण गर्यौ? अथवा स्व-कल्याणमा नै समय गइरहेको छ? स्व कल्याण गर्ने समय धेरै बितिसक्यो। अब विधाता बन्ने समय आएको छ। त्यसैले बापदादाले फेरि समयको इशारा दिइरहनु भएको छ। यदि अहिलेसम्म पनि विधातापनको स्थितिको अनुभव गरेका छैनौ भने अनेक जन्म विश्वराज्य अधिकारी बन्ने पदमापदम भाग्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ। किनकि विश्व राजन विश्वका माता-पिता अर्थात् विधाता हुन्छन्। अहिलेको विधातापनको संस्कारले अनेक जन्म प्राप्ति गराइरहने छ। यदि अहिलेसम्म लिने संस्कार कुनै पनि रूपमा छ– नाम लेवता, शान लेवता वा कुनै पनि प्रकारको लेवताको संस्कार छ भने त्यसले विधाता बनाउँदैन।
तपस्या स्वरूप अर्थात् लेवताको त्यागमूर्त। यो हदको लेवताले त्यागमूर्त, तपस्वीमूर्त बन्न दिँदैन। त्यसैले तपस्वीमूर्त अर्थात् हदको इच्छा मात्रम् अविद्या रूप हुनु छ। जसले लिने संकल्प गर्छ उसले अल्पकालको लागि लिन्छ तर सदाकालको लागि गुमाउँछ, त्यसैले बापदादाले बारम्बार यो कुराको इशारा दिइरहनु भएको छ। तपस्वी रूपमा विशेष विघ्न रूप यी अल्पकालका इच्छा हुन् त्यसैले अब विशेष तपस्याको अभ्यास गर्नु छ। समान बन्ने यो सबूत दिनु छ। स्नेहको सबूत त दियौ यो खुशीको कुरा हो। अब तपस्वीमूर्त बन्ने सबूत देऊ। बुझ्यौ? अनेक प्रकारका संस्कार छन् भने पनि विधातापनको संस्कारले अन्य संस्कारलाई स्वत: दबाइदिन्छ। त्यसैले अब यो संस्कारलाई प्रत्यक्ष गर। बुझ्यौ? जसरी मधुबनमा दौडेर आइपुगेका छौ त्यसैगरी तपस्वी स्थितिको अवस्थातर्फ दौड। अच्छा, आयौ राम्रो भयो। सबै यसरी दौडेर आएका छौ मानौं विनाश हुँदै छ। जे पनि गर्यौ, जे पनि भयो बापदादालाई प्रिय छ किनकि बच्चाहरू प्रिय छन्। हरेकले यही सोच्यौ– म गइरहेको छु। तर अरू पनि आइरहेका छन् यो सोचेनौ। सच्चा कुम्भको मेला त यहाँ लाग्यो। सबै अन्तिम मिलन, अन्तिम डुबुल्की लगाउन आएका छौ। यस्तो सोच्यौ होला– यति सबै गइरहेका छन् भने मिल्ने विधि कस्तो होला भनेर। यसको पनि वास्ता गरेनौ, न स्थान देखेका थियौ, न रिजर्वेशनलाई नै हेर्यौ। अब कहिल्यै पनि यो बहाना गर्न सक्दैनौ– रिजर्वेशन मिल्दैन भनेर। ड्रामामा यो पनि एउटा रिहर्सल भयो। संगमयुगमा आफ्नो राज्य छैन। स्वराज्य छ तर धरनीको राज्य त छैन, न बापदादाको स्वको रथ छ। पराई राज्य, पराई तन छ त्यसैले समय प्रमाण नयाँ विधिको आरम्भ गर्नको लागि यो सिजन भयो। यहाँ त पानीको लागि पनि सोच्न पर्छ, त्यहाँ त झरनामा नुहाउँछन्। जो पनि जति पनि आएका छौ बापदादाले स्नेहको रिटर्नमा स्नेहले स्वागत गर्नुहुन्छ।
अहिले समय दिइएको छ विशेष फाइनल परीक्षा भन्दा पहिला तयारी गर्नको लागि। फाइनल परीक्षा भन्दा अगाडि समय दिन्छन् साथै छुट्टी पनि दिन्छन् नि। त्यसैले बापदादाले अनेक कारणले यो विशेष समय दिइरहनु भएको छ। कुनै कारण गुप्त छन् कुनै कारण प्रत्यक्ष छन्। तर विशेष हरेकले यो ध्यान दिनु– सदा बिन्दु लगाउनु छ अर्थात् बितेकोलाई बित्यो भनेर बिन्दु लगाउनु छ र बिन्दु स्थितिमा स्थित भएर राज्य अधिकारी बनेर कार्य गर्नु छ। सर्व खजानाको बिन्दु अर्थात् सर्व प्रति विधाता बनेर सिन्धु बनेर सबैलाई भरपुर बनाउनु छ। त्यसैले बिन्दु र सिन्धु– यी दुई कुरालाई स्मृतिमा राखेर श्रेष्ठ प्रमाणपत्र लिनु छ। सदा श्रेष्ठ संकल्पको सफलताले नै अगाडि बढिरहनु छ। त्यसैले बिन्दु बन्नु, सिन्धु बन्नु यही सर्व प्रति वरदाताको वरदान हो। वरदानको लागि दौडेर आएका हौ नि। अब यही वरदाताको वरदानलाई सदा स्मृतिमा राख। अच्छा।
चारैतिरका सर्व स्नेही, सहयोगी बच्चाहरूलाई, सदा बाबाको आज्ञा पालन गर्ने आज्ञाकारी बच्चाहरूलाई, सदा फराकदिल, बडा दिलले सबैलाई सर्व खजाना बाँड्ने, महान पुण्य आत्मा बच्चाहरूलाई, सदा बाबा समान बन्ने उमंग-उत्साहले उड्ती कलामा उड्ने बच्चाहरूलाई, विधाता, वरदाता, सर्व खजानाका सिन्धु बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
अव्यक्त बापदादासँग पार्टीहरूको भेटघाट
१- आफूलाई पदमापदम भाग्यवान अनुभव गर्छौ! किनकि दिनेवाला बाबाले यति दिनुहुन्छ जुन एक जन्म त भाग्यवान बन्छौ नै तर अनेक जन्मसम्म यो अविनाशी भाग्य चलिरहने छ। यस्तो अविनाशी भाग्य कहिल्यै सपनामा पनि सोचेका थियौ! असम्भव लाग्थ्यो नि? तर आज सम्भव भयो। त्यसैले यस्ता श्रेष्ठ आत्मा हौ– यो खुसी रहन्छ? कहिल्यै कुनै पनि परिस्थितिमा खुसी त गायब हुँदैन! किनकि बाबाद्वारा खुसीको खजाना नित्य मिलिरहन्छ र जुन चीज नित्य मिल्छ त्यो त बढ्छ नि। कहिल्यै पनि खुसी कम हुन सक्दैन किनकि खुसीका सागरद्वारा मिलि नै रहन्छ, अखुट छ। कहिल्यै पनि कुनै कुराको चिन्तामा रहनेवाला होइन। सम्पत्ति के होला, परिवार के होला? यो पनि चिन्ता छैन, बेफिक्र! पुरानो दुनियाँको के हुन्छ! परिवर्तन नै हुने हो नि। पुरानो दुनियाँमा जतिसुकै श्रेष्ठ भए पनि सबै पुरानो नै हो त्यसैले बेफिक्र बन्यौ। थाहा छैन– आज छौं, भोलि रहन्छौं वा रहँदैनौं– यो पनि चिन्ता छैन। जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। ब्राह्मणहरूको लागि सबै राम्रो छ। नराम्रो केही छैन। तिमीहरू त पहिला नै बादशाह छौ, अहिले पनि बादशाह, भविष्यमा पनि बादशाह। जब सदाको लागि बादशाह बन्छौ तब बेफिक्र हुन्छौ। यस्तो बादशाही जुन कसैले खोस्न सक्दैन। कुनै बन्दुकले बादशाही उडाउन सक्दैन। यही खुसी सदा रहिरहोस् र अरूलाई पनि दिइरहनु छ। अरूलाई पनि बेफिक्र बादशाह बनाऊ। अच्छा!
२- सदा आफूलाई बाबाको यादको छत्रछायाँमा रहने श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्छौ? यो यादको छत्रछायाँले सर्व विघ्नबाट सुरक्षित गरिदिन्छ। कुनै पनि प्रकारको विघ्न छत्रछायाँमा रहनेहरूको पासमा आउन सक्दैन। छत्रछायाँमा रहनेहरू निश्चित विजयी हुन्छन् नै। त्यसैले यस्तो बनेका छौ? छत्रछायाँबाट यदि संकल्प रूपी पाउ पनि बाहिर निस्कियो भने मायाले आक्रमण गर्छ। कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति आओस्, छत्रछायाँमा रहनेहरूको लागि मुश्किल भन्दा मुश्किल कुरा पनि सजिलो हुनेछ। पहाड समान कुरा रुई समान अनुभव हुनेछ। यस्तो छत्रछायाँको कमाल हुन्छ। यस्तो छत्रछायाँ मिलेको छ भने के गर्न पर्ला! चाहे अल्पकालको कुनै पनि आकर्षण होस् तर बाहिर निस्कियौ भने गयौ। त्यसैले अल्पकालको आकर्षणलाई पनि बुझिसकेका छौ। यस्तो आकर्षणबाट सदा टाढै रहनु। हदको प्राप्ति त यो एक जन्ममा समाप्त हुन्छ। बेहदको प्राप्ति सदा साथ रहन्छ। त्यसैले बेहदको प्राप्ति गर्ने अर्थात् छत्रछायाँमा रहने विशेष आत्मा हौ, साधारण होइनौ। यो स्मृतिले सदाको लागि शक्तिशाली बनाइदिन्छ।
जो सिकीलधे र अति प्यारा हुन्छन् तिनीहरू सदा छत्रछायाँ भित्र रहन्छन्। याद नै छत्रछायाँ हो। यो छत्रछायाँबाट संकल्प रूपी पाउ पनि बाहिर निकाल्यौ भने माया आउँछ। यो छत्रछायाँले मायालाई सामुन्ने आउन दिँदैन। मायाको तागत हुँदैन छत्रछायाँमा आउने। तिनीहरू सदा मायामाथि विजयी बन्छन्। बच्चा बन्नु अर्थात् छत्रछायाँमा रहनु। यो पनि बाबाको प्यार हो जुन सदा बच्चाहरूलाई छत्रछायाँमा राख्नुहुन्छ। त्यसैले यही विशेष वरदान याद राख्नु छ– अति प्यारा बन्यौं, छत्रछायाँ मिल्यो। यो वरदानले सदा अगाडि बढाइरहन्छ।
सबैले जागरण गर्यौ! तिम्रा भक्तहरूले जागरण गर्छन् भने ती भक्तहरूलाई सिकाउने त इष्टदेव नै हुन्छन्। जब यहाँ इष्टदेवहरूले जागरण गर्छौ तब न त्यहाँ भक्तहरूले नक्कल गर्छन्। त्यसैले सबैले जागरण गर्यौ अर्थात् आफ्नो खातामा जम्मा गर्यौ। त्यसैले आजको रात कमाउने सिजनको रात भयो। जसरी कमाइको सिजन हुँदा सिजनमा जाग्नु पर्ने हुन्छ नि। यो कमाइको सिजन हो त्यसैले जाग्नु अर्थात् कमाउनु। त्यसैले हरेकले आ-आफ्नो यथाशक्ति जम्मा गर्यौ र यही जम्मा गरेको महादानी बनेर अरूलाई पनि दिँदै रहन्छौ र स्वयं पनि अनेक जन्म खाइरहन्छौ। अब सबै बच्चाहरूलाई परमात्म मेलाको गोल्डन चान्सको गोल्डन मर्निङ्ग भनिरहनु भएको छ। त्यसो त गोल्डन भन्दा पनि डाइमण्ड मर्निङ्ग हो। स्वयं पनि डाइमण्ड हौ र मर्निङ्ग पनि डाइमण्ड छ र जम्मा पनि डाइमण्ड नै गर्छौ त्यसैले सबै डाइमण्ड नै डाइमण्ड छौ त्यसैले डाइमण्ड मर्निङ्ग गरिरहनु भएको छ। अच्छा।
संकल्पलाई पनि चेक गरेर व्यर्थको खातालाई समाप्त गर्ने श्रेष्ठ सेवाधारी भव
श्रेष्ठ सेवाधारी त्यो हो, जसको हर संकल्प शक्तिशाली हुन्छ। एउटा पनि संकल्प कतै व्यर्थ नजाओस्। किनकि सेवाधारी अर्थात् विश्वको मञ्चमा पार्ट खेल्नेवाला। सारा विश्वले तिम्रो अनुकरण गर्छन्। यदि तिमीले एउटा पनि संकल्प व्यर्थ गुमायौ भने आफू प्रति मात्र गुमाएनौ, अनेकौंको लागि निमित्त बन्छौ। त्यसैले अब व्यर्थको खातालाई समाप्त गरेर श्रेष्ठ सेवाधारी बन।
सेवाको वायुमण्डलको साथ-साथै बेहदको वैराग्य वृत्तिको वायुमण्डल बनाऊ।
सूचना:– आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। सबै राजयोगी तपस्वी भाइ बहिनीहरूले साँझ ६:३० देखि ७:३० बजेसम्म विशेष योग अभ्यासको समयमा मास्टर सर्वशक्तिमानको शक्तिशाली स्वरूपमा स्थित भएर प्रकृति सहित सर्व आत्मालाई पवित्रताका किरणहरू दिएर सतोप्रधान बनाउने सेवा गर्नु हुने छ।